Indibano yocweyo yethiyetha kunye nokubaliswa kwamabali kwabo bathetha isiArabhu kunye nesiNgesi kunye noNadeem · Oyoun | Ukucinga ngokutsha kweNkcubeko
Iworkshop yethiyetha kunye nokubalisa amabali kwizithethi zesiArabhu kunye nesiNgesi kunye noNadeem
Ngomhla woku-22 ku-14pm - 17: 00
« I-UN: IFAKA - I-Brunch yoLuntu kunye no-DJ Robert Soko
UN: UNGAFAKAYO - Iphaneli // Nathi? Inkcubeko yaseJamani (ekhethiweyo) yokwamkela »
يالا نحكي ونمثل ونلعب ونزقطط وبالعربي كمان!
Ithiyetha yasekuhlaleni kunye nokubaliswa kwamabali kunokuba zizixhobo ezithandekayo zokudibanisa, ukuziva ubonwa, ukonwabisa / ukonwabisa kwaye nje wonwabe kakhulu. Ngexesha lezi ndibano zocweyo sijolise ekufundeni ithiyetha kunye neendlela zokubalisa amabali kunye. Siza kubalisa amabali omnye komnye kwindawo ekhuselekileyo, senze umboniso kwakhona, kwaye sidlale sishukuma imizimba yethu kwaye sishukuma amaxhala ethu kwinkqubo. Ucweyo luya kuqhutywa ngesiArabhu nesiNgesi. Ivulelekile kuye wonke umntu (akukho mfuneko yawo nawaphi na amava angaphambili ngokudlala kunye nethiyetha). Nangona kunjalo, sikhuthaza ngokukodwa amaqela amancinci kunye namaqela angahoywayo eBerlin kunye nabantu abaphakathi kwe-18 kunye ne-27 yeminyaka ubudala! Zama iiseshoni nge-22/05/2022 kunye ne-24/05/2022 khetha ibe nye kwaye masidlale!
Iworkshop isimahla kodwa ubhaliso luyafuneka. Ukubhalisa: nceda uthumele iinkcukacha zakho kunye nosuku oluthandayo (22nd okanye 24th) ukuya nadeemy@riseup.net
Ulwimi: IsiArabhu nesiNgesi
UNadeem yingcali yethiyetha, umenzi wefilimu kunye nomhlohli ondwendweleyo oseBerlin. Ubudlelwane bakhe kunye nethiyetha baqala kwiminyaka eyadlulayo eCairo njengoko wayesokola ngobunyani bakhe bezentlalo nezopolitiko kwaye wayefuna indlela entsha yokunxibelelana, azive ekhona ngakumbi emzimbeni wakhe kwaye wonwabe. Ukusukela ngoko, uye wadlala kwimidlalo yethiyetha emininzi esebenzisanayo nephuculweyo phakathi kwezinye iindlela zemiboniso yoluntu. Phambi koqeqesho lwakhe lwethiyetha waye wafundela ukwenza iifilimu, ezopolitiko kunye nezoqoqosho. Ujolise ngokuqhubekayo ekufumaneni iindlela zokuxuba ezi zihloko njengegcisa lezinto ezininzi.
◥ E-Oyoun, akukho ndawo yocalucalulo ngokwesini, intiyo, ukoyikwa kwabantu, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olufana nokuchasa uMnyama, ukuchasa amaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasayo ubuJuda, kunye naluphi na uhlobo lobundlobongela okanye ubundlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo kubo bonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasana kwaye simelane. Ukuba kukho umntu / kukho into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukuze bancede! Ukuba ufuna ukwabelana nathi ngamava emva kwesiganeko, nceda usibhalele i-imeyile > hello@oyoun.de okanye usithumelele umyalezo ongaziwayo nge yethu kwiwebhusayithi.
IBhola encinci yoMhla wokuzalwa wePhupha nguMiyake-Mugler
Julayi 8, 19:00 - Julayi 9, 00:00
İDEAL (ukwenziwa kwethiyetha)
Julayi 9, 20:00 - 21: 10